NgoJuni 30, 2009 - Ellicott Dredges
Umthombo: I-International Dredging Review Associated Minerals Corp. isebenza ngebhakede le-dredger eGreen Cove Springs, eFlorida, eningizimu neJacksonville. I-dredge "Rocky Ford" imba isihlabathi esithwala amaminerali esiqukethe i-rutile, i-zircon, ne-ilmenite. I-dredge isebenzisa iphampu engama-22-intshi. Abasebenzi abayi-108 baqhuba lo dredge, isigayo esimanzi ngemuva nje kokwehla, isigayo esomile esakhiweni senkampani kanye nehhovisi. I-dredge isebenza amashifu amathathu wamahora ayisishiyagalombili ngosuku, izinsuku ezingama-363 ​​ngonyaka. I-dredge imbe kancane kancane idiphozi, esepulazini lomuthi wase-Union Camp. Izihlahla ziyavunwa nenhlabathi engaphezulu iyaphucwa futhi ...